XOG:- Madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo ku wajahan magaalada B/weyne - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo ku wajahan magaalada B/weyne
Ilo lagu kalsoonaan karo oo aynu heleyno ayaa sheegaya in wafdi uu hogaaminaayo madaxweyanaha cusub ee maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ay ku wajahan yihiin magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wafdiga madaxweyne Cali C/laahi Cosoble oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) iyo C/fitaax Xasan Afrax oo hore u ahaa guddoomiyiha gobolka Hiiraan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada B/weyne, halkaasi oo ay kulamo kula qaadan doonaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Hiiraan.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Hiiraan waxay kulamo kala duwan ku yeelanayeen magaalada B/weyne, waxyna intooda badan isku raaceen inay soo dhaweeyaan islamarkaana ay taageeraan wafdigaan uu hogaaminayo madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Ilaa iyo haatan lama oga wafdigaan ku wajahan magaalada B/weyne waxay kala kulmi doonaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Hiiraan ee uu horkacaayo Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa la xasuustaa inuu si weyn uga soo horjeeday shirka Jowhar oo maamulka loogu sameeynayay gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ee Hirshabeele, halkaas oo ugu dambeyn loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo Cali C/laahi Cosoble oo kasoo jeeda beesha Xawaadle.